Afaka Xians Hifalifaly? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Afaka Xians Hifalifaly?
No lasa Kristianina hoe ny faran'ny ny mahafinaritra? Izany no fanontaniana mahaliana ary mihevitra aho fa ny tsara tarehiko mba hanontany. Misy sary anankiray Kristianisma izany matetika voaloko. Rehefa mieritreritra ny Fivavahana Kristianina ny olona dia mieritreritra ny zavatra samy hafa. Misy mihevitra nikiakiaka TV mpitory, ny hafa mieritreritra lehilahy fotsy ao amin'ny ady sy teny hotsaraina mainty renibeko taloha tao amin'ny fiangonana lehibe satroka. Misy mihevitra mpandala ny mahazatra ara-politika, na ireo olona izay tsy tia ny siansa. Saingy vitsy dia vitsy ny olona mihevitra ny Fivavahana Kristianina, ary mieritreritra: Hey, izay ho zavatra mahafinaritra hanao! Lasa Kristianina toa tsy mahafinaritra ny olona.
Kristianina efa azonay nalaza ho killjoy. Izany zavatra ho an'ny olona sy ny antitra mankaleo ny olona. Iray mpiangaly rap amin'ny hira milaza, "Raha toa ka matahotra, dia mankany am-piangonana. "Toa fiangonana kristianina dia ho an'ny saro-kenatra, matahotra punks. Olona mieritreritra lasa Kristianina dia midika hoe tsy maintsy manao fitoriana atao sy ny fahari akanjo, ary mihaino mozika ratsy ny Kristianina, ary mijanona ho mangatsiaka. Voalohany indrindra, ny sasany y'all tsy hampangatsiaka eo amin'ny toerana voalohany, fa izany no tantara hafa.
Vao avy nijery izany Ja Rule resadresaka omaly. Izy miresaka momba ny zavatra niainany amin'ny fiangonana. Ao amin'ny fiangonana foana ny zavatra niainany hoy tonga tahaka anao ihany, fa tsy tena nisaina izany. Tsy mbola nahatsiaro ho tonga soa. Ary rehefa nanontany raha olona nanaiky an'i Kristy ho any ny fiainany, hoy izy dia tsy vonona. Nieritreritra izy fa midika izy mba hanao firaketana an-tsoratra ny filazantsara ankehitriny. Ny sary izay efa natao momba ny Fivavahana Kristianina, no anankiray izay tsy maintsy hanova ny zava-drehetra momba ny tenanao; maintsy intsony ianao nankafy ny zava-drehetra ianao no mankafy. Toy ny hoe lasa Kristianina no zavatra farany tiako atao raha te ho tia ny tenanao!
Inona no atao hoe Fun?
Toy izao ny fomba mahafinaritra dia faritana ao amin'ny rakibolana. Fun dia: Ny loharanom-fifaliana, voly, na ny fahafinaretana. Tsy misy fanontaniana fa lasa Kristianina dia midika hoe ny fahalalana sy ny traikefa ny fifaliana, voly, ary fahafinaretana no hanova. Raha ianao nanontany tena raha toa ka afaka mijanona toy izany koa, dia tsy afaka. Tsy misy isalasalana fa lasa Kristianina manova ny fomba hahita fiainana.
Ny fanontaniana dia hoe: no hanampy na handratra ny mahafinaritra? Moa Fivavahana Kristianina ny fahavalo ny fifaliana, voly, ary fahafinaretana? Sa no manampy anao hiaina fifaliana, voly, ary mankasitraka ny tena heviny? Efa rehetra eo amin'ny kolontsaina nahazoanao izany marina izy? Ve ny Fivavahana Kristianina sy ny mahafinaritra amin'ny mifanohitra faran 'ny karazany?
Mieritreritra aho fa ny iray amin'ireo antony olona miresaka momba ny Fivavahana Kristianina izany dia noho ny fomba Kristianina aseho ao amin'ny haino aman-jery. Izay mety ho lehilahy kristianina ao amin'ny filma na fahitalavitra no ratsy indrindra. Izy ireo matetika ianao mitsara sy corny. Tsy ara-drariny ny olona kisarisary Kristianina maro, ary tandremo ny mampihomehy indrindra zavatra.
Ny antony faharoa dia satria ny Kristianina sasany sy ireo izay milaza ny tenany ho Kristianina dia manome eny fa Vibe. Izy ireo mandray anjara amin'ny ny stereotype. Ny Kristianina sasany tena tsy mahazo na inona na inona ary manome tsiny azy an'Andriamanitra, toy ny hoe ny NY tsiny.
Ka inona no hevitrao? Manana roa valin 'ny fanontaniana ho an'ny anio alina. No lasa Kristianina hoe ny faran'ny ny mahafinaritra? Ny voalohany valiny: No
I. Tsia - lasa Kristianina no tsy midika hoe ny anton'ny Fun
Raha tena mieritreritra momba izany, izany ny fanontaniana hafahafa mba manontany. "Ve lasa Kristianina hoe ny faran'ny fifaliana, voly, ary ny fahafinaretana teo amin'ny fiainako?"Izao no voalaza zavatra momba an'Andriamanitra mba hangataka izany fanontaniana. Raha izany hoe Kristianina dia midika hoe manaraka an'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy, avy eo dia avereno lazaina amin'ny teny ny fanontaniana Izany dia midika hoe manontany: No tian'Andriamanitra ianao mba manana Un-mahafinaritra ny fiainana? Mba hamaliana eny milaza zavatra tsy marina momba Azy. Izy no Mpamorona ny zavamananaina rehetra. Mazava ho azy fa tiany ianao mba hankafy ny fiainana fa namorona.
Toy ny nanontany raha Jay-Z na Kendrick Lamar te anao hankahala ny raki-kira vaovao. No tiany fotsiny ianao mba hijaly ny alalan 'izany dia mankahala azy? Na toy ny Steven Spielberg naniry anao hankahala ny sarimihetsika, na tiany anao ho rendremana nandritra izany eny satria nankahala Lincoln be. Eny Mazava ho azy fa tsy! Izy ireo no nanao azy, ampahany, ka olon-kafa no hahazo azy.
Ny fiainana dia tsy mitovy, satria tsy ny sasany fotsiny endriky ny fialam-boly, fa misy fitoviana. Inona no fantatsika avy amin'ny Soratra Masina dia ny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tsara. Izy namorona ny fiainana. Izy no nanao antsika araka ny endriny, ary tiany isika mba hiaina izany fiainana ho voky. Tiany hankafy ny fiainana, ary hidera Azy ho azy.
Tsy misy na inona na inona ao amin'ny Baiboly izay toa manondro fa tsy maniry antsika mba hankafy ny fiainantsika. Rehefa mamaky ny Baiboly tsy izay fotsiny ny sary ianao handeha mahazo. Ny fomba ny olona hiresaka momba ny Fivavahana Kristianina no tiako hieritreritra nisy andininy izay hoy i Jesosy, "Raha manaraka ahy, tsy maintsy ho fadiranovana, mankahala ny zava-drehetra, ary hisintona ny hafa teo aminareo. "Fa ianao tsy handeha ny mahita andinin-tsoratra masina toy izany.
Kosa ianao te hahita Andriamanitra antsika hankafy ny fiainantsika. Aho handeha hamaky ny roa andinin-tsoratra masina izay mihevitra aho fa teboka izany avy.
Olona mihevitra Andriamanitra te hiaro antsika amin'ny zava-tsoa, fa ny lainga. Henoy James 1:16-17.
Aza mety hofitahina ianareo, ry rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, midina avy amin'ny Rain'ny fanazavana Izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fiovana noho. (James 1:16-17)
Andriamanitra tsy miezaka ny hitandrina antsika amin'ny zava-tsoa; Andriamanitra no Mpanome ny zava-tsoa rehetra. Izy no loharano. Izany no toy ny ankizy ao amin'ny trano fitaizana zaza kamboty nanontany raha ny olona izay mandoa ny fialofana sy ny fitafiany maniry zavatra tsara ho azy ireo. Nomen'izy ireo vola ho an'ny zavatra rehetra izany inona no holazaina? Tena misy lojika fanontaniana.
Andriamanitra no namorona ny finamanana sy ny fanambadiana. Andriamanitra no namorona ny mitsiky sy mihomehy. Ireo no fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin 'Andriamanitra. Koa hanao zavatra toy ny tsy tiany isika mba hankafy azy ireo dia mahatsikaiky.
Ahoana ny amin'i Jesosy? Ve izy manan-kavaly momba izany? ao amin'ny Jaona 10, Jesosy dia mampifanohitra ny tenany amin'ny mpampianatra sandoka. Ireo mpampianatra sandoka mitarika ny olona amin'ny lalan-diso; ratsy izy ireo mpiandry ondry. I Jesoa miantso azy ireo mpangalatra.
"Ny mpangalatra tsy avy hangalatra, mamono, ary handringana. Izaho avy mba hananany fiainana, ary manana be dia be. " (John 10:10)
Izany mandeha mivantana manohitra ny zavatra Matetika ny olona no milaza eo amin'ny kolontsaina. Mihevitra izy ireo Andriamanitra te hangalatra. Hangalatra ny fifaliana, fahasambarana, ary safidy malalaka. Fa tian'Andriamanitra hahafatin-ketaheta anay sy ny hisintona antsika hidina. Fa hoy i Jesosy, Tonga mba hanome ny fiainana be dia be, na ny fiainana feno. Tiany isika mba hiaina ny fiainantsika ho voky. Ho isika miresaka bebe kokoa momba izany tatỳ aoriana.
ao amin'ny Salamo 16, Davida dia miresaka amin'Andriamanitra ary eto ny izay lazainy.
"Ianao Hampahafantatra ahy ny lalan'aina; eo anatrehanao misy fa havokisam-pifaliana; eo ankavananao ary fahafinaretana no mandrakizay bebe kokoa. " (Salamo 16:11)
Koa tonga ho akaiky kokoa an'Andriamanitra dia tsy mitarika ho amin'ny mankaleo alahelo, dia mitondra any amin'ny fifaliana. Tsy fotsiny mety ho fifaliana aho fa havokisam-pifaliana. Ary misy fahafinaretana. Tsy dimy minitra na dimy taona ny fahafinaretana, fa fahafinaretana mandrakizay.
I afaka handeha nandritra ny andro miaraka amin'ny andinin-tsoratra masina toy izany. Kristianina dia tsy ny fahavalo ny fifaliana, voly, ary fahafinaretana. Tena marina ny lalana mankany amin'ny tena fifaliana, voly, ary fahafinaretana.
Tamin'ny herinandro lasa, izaho sy ny vadiko dia nandeha mba hijery Gravity in IMAX 3D. Fantatrao izy ireo hanome anao clunky lehibe ireo solomaso mba hitafy. Ahoana anefa raha ireo fa tsy solomaso no nitondra ny torimaso saron-tava avy any an-trano? Ianao mahalala izay zavatra hitafy toy ny solomaso izay hanakana avy ny mazava? Tsy mahita na inona na inona, fa ny haizina.
Ary inona no mety ho nitranga raha toa ka raha tokony 3D solomaso no hitafy ny torimaso saron-tava? Malahelo isika ny rehetra Te sarimihetsika. Fa hatrizay hitafy ireo 3D solomaso dia mahagaga. Toy izahay tao amin'ny sarimihetsika. Aho nihazona teo ny zava-pisotro izany tsy mitsingevana ao amin'ny rivotra. Stuff dia manodidina antsika. Stuff ho avy anay. Ny solomaso nitondra izany traikefa ho amin'ny fiainana.
Hitondrantsika Andriamanitra tahaka izy, ny miezaka mba hanolorany antsika fa matory sarontava ao amin'ny sarimihetsika, raha tena izy ny miezaka mba hanolorany antsika ny 3D solomaso. Izy no tsy miezaka ny hanakana ny fifaliana, ka hamela anay ao amin'ny maizina. Tiany ny fifaliantsika ho kokoa sy ho voky. Tiany hankafy ny fiainana araka izay natao ho tia. Mampalahelo fa tsy mahalala izay foana fa mitovy.
Ny olana dia izahay ambanin'ny fahatsapana fa ny fahafinaretana manao na inona na inona isika, dia midika hoe mahatsapa toy ny na inona na inona nomena fotoana. Fa raha tena mieritreritra momba izany, rehetra amintsika no mahafantatra fa misy ratsy hevitra. Iza no te-ho andevo ny zava-drehetra izy ireo te hanao? Izahay mora niova hevitra.
Ny zanako lahy te-hiala voly ary mihevitra mifikitra ny fanondrony eo amin'ny fivoahan'ny no fomba tsara indrindra hanaovana izany. Mila tari-dalana avy amiko. Ary raha ny zanako lahy no handeha hiala voly, fa tsy ho faty izy, tsy maintsy matoky ahy. Heveriny nandeha nidina ny tohatra toa mahafinaritra. Fa toy ny olon-dehibe, Fantatro fa tsy mandeha tsara ary Ho nianjera teo.
Andriamanitra no Mpamorona ny fiainana sy Fantany. Izahay rehetra manaiky fa tsy ny rehetra izahay-satria fantany. Misy zavatra tsy azoko. Ary satria izahay mpanota, isika, manome lanja ny zavatra tsy mety. Tsy maintsy matoky an'Andriamanitra sy ny toetrany.
Ny olona sasany dia mihevitra, "Izay toa tsara fa Andriamanitra dia manana ireo didy rehetra izay milaza amintsika ny tsy hanao zavatra mahafinaritra." Ary ianao marina; misy didy izay mandrara antsika amin'ny zavatra sasany. Anefa no tena fa ny voly dia ho simba?
Izay mitondra ahy ho any ny faharoa valin 'io fanontaniana io. No lasa Kristianina hoe ny faran'ny ny mahafinaritra? Ny faharoa valiny: Indraindray.
II. Indraindray – Nanaraka an'i Jesosy dia midika ny Farany ny sasany ny Fun
Tsy te-hamitaka anareo. Lasa Kristianina hoe ianao no tsy maintsy handà ny tenanao. Misy zavatra tianao izay ratsy ho anao, zavatra izany any aoriana any hangalatra fifaliana fa tsy manome izany.
Fimamoana toa mahafinaritra nefa mitondra any adala fanapahan-kevitra. Firaisana ara-nofo alohan 'ny fanambadiana toa mahafinaritra, fa lalina haavon'ny fifandraisana akaiky dia tsy natao ho nankafy ankoatra izany fanoloran-tena mandritra ny fiainana eo ambany. Izany no fomba lalina indrindra azonao omena ny tenanao ho any olon-kafa. Indraindray toa mandainga tahaka izany dia mitarika ny voly fa manimba antsika sy ny hafa.
Rehefa Efa niaiky, Andriamanitra nahary ny fiainana sy ny fomba fantany ny tokony ho tia. Ny didiny dia ho an'ny tsara. Ary teo ankavanany ary fahafinaretana no mandrakizay. Ary rehefa tsy mankatò Azy, no mifindra hiala tena fifaliana. Andriamanitra tsy mitandrina antsika amin'ny fiainana tsara; mitandrina ny tenantsika amin'ny fiainana tsara rehefa tsy mankatò Azy.
Ary tahaka ny asa be fitiavana i Jesoa miantso antsika mba mandà ny tenantsika.
Dia hoy izy rehetra, "Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany isan'andro, ka hanaraka Ahy. " (Luke 9:23)
Inona no dikan'ny hoe mandà ny tenanao? Mandà tena dia midika hoe tsy ny tenanao. mandà ny tenanao. Ara-dalàna mandà izay te-hanao.
Tsy toa tsara sy fluffy. Ianao angamba tsy dia ataovy ho iray mampiavaka karatra. Tsy Tena nampahery ny mpianatra. Fotsiny i Jesosy hoe mifehy sy hoe sy manompa?
Raha lavorary izahay, mangataka antsika mba mandà ny tenantsika ho mampihomehy. Raha tsara foana izahay sy hendry mangataka antsika mba mandà ny tenantsika ho hafahafa. Fa raha diso isika mangataka antsika mba mandà ny tenantsika tia. Raha voafitaka isika ary misavorovoro ny, mangataka antsika mba mandà ny tenantsika dia manampy.
Tsy afaka matoky foana ny tenanao. Misy zavatra tianao izay ratsy ho anao. Impiry moa no nanao fanapahan-kevitra izay toa voly, fa tsy maintsy hiatrika ny vokany tatỳ aoriana?
Jesosy nanao hoe raha te-hanaraka Ahy, tsy maintsy hijanona tsy hanaraka ny tenanao. Tahaka ny olona iray nangataka ny toro-lalana. Raha mahatsapa ianao efa handeha ho amin'ny lalana diso, ary mangataka olona mba hanampy anao, tsy afaka mandeha foana ny lalanao. Fanarahana an'i Jesosy dia tamin'ny heviny iray miaiky fa very ianao ary mila ny olona iray mba hitarika anao. Àry i Jesosy hoe:, Afoizo. Omeo ahy ny familiana no. Ianao efa nanokan-tena ho ahy. Ny Tompo aho. Aho ny Mpitarika. Izao no dikan'ny hoe hanaraka Ahy.
Raha ny vadiko nanao hoe:, raha te-ho vadiko tsy maintsy handa tena ka hanaraka Ahy. Aho ho toy ny huh? Raha zanako lahy nilaza fa… Tena aho ho gaga satria dia tsy miresaka. Raha ny filoha ny United States dia nilaza fa, Handà izany aho. Na ny pasitera nanao hoe:, handà ny tenanao ka hanao izay rehetra lazaiko na inona na inona izany, Aho handeha ho any amin'ny fiangonana hafa. Nahoana? Satria tsy te-hanome ny voa teo amin'ny fiainako tanteraka ny hafa ny olona mpanota. Tsy mitombina izany fihetsika. Tsy manampy ahy. Izy ireo tsy afaka hitarika ny fiainako tanteraka na. Manana ny olana.
Fa i Jesoa Kristy dia tsy olon-kafa ny olona mpanota. Izy masina, Izy no Mpamorona, ary maty toy izany ny mpanota ho afaka hihavana amin'Andriamanitra. Izy no mendri-pitokisana. Fantany izay tokony hijery ny fiainako toy ny. Izy no tsy ho ambany, Izy no tia ahy. Izany hoe Kristianina dia midika fa sonia ny hoe tsy ny tenanao indraindray.
Raha tsy hoe ianao tsy ho tena tsy tapaka, dia tokony manontany tena raha tena ianao nanaraka an'i Jesosy. Satria mety tsy tapaka izahay ary mila ny fanampiany.
Ny iray amin'ireo boky realest ao amin'ny Soratra Masina dia ny bokin'ny Mpitoriteny. Izany dia midika hoe angamba nosoratan'i Solomona. Ao anatiny, dia miresaka momba ny fomba misy dikany ny zava-drehetra. Koa satria efa nanana be dia be ny zava-drehetra, dia miteny avy amin'ny zavatra niainany. Ity zavatra nolazainy.
"Izay tia vola dia tsy ho afa-po amin'ny vola." (Mpitoriteny 5:10)
Noho izany dia afaka maka izany, toy ny eto izahay. Izy ireo mankahala ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny vola. Tsy tian'Andriamanitra ahy ho tia azy. Na mahita azy io ho fiarovana anareo Andriamanitra avy nanenjika mafy ny zavatra izay tsy fahafaham-po anao
Henoy izay lazainy tatỳ aoriana:
Ny olon-drehetra koa dia mba nomen'Andriamanitra harena sy fananana ary ny hery mba hankafy azy ireo, ary ny manaiky ny be sy ho ravoravo amin'ny fisasarany-izany no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fa tsy hahatsiaro loatra ny andro niainany izy, satria miaro azy variana amin'ny fifaliana ao am-pony. (Mpitoriteny 5:19-20)
Dia fa ny mifanohitra? Ankafizo ny vola? Nihevitra aho hoy izy dia tsy fahafaham-po anao. Andriamanitra dia manome fifaliana, tsy vola. Ny vola tsy fahafaham-po anao, izany fotsiny mahatonga anao te vola bebe kokoa. Tena moana ho velona ho azy. Afaka mankafy zavatra, tsy miaina eo ambany diso fiheverana fa izany no hahavoky ny fanahinao. Andriamanitra no miezaka mba hiarovana antsika.
Ny olana dia tiantsika ny hanompo ny fanomezana fa tsy amin'ny Mpanome, Famoronana fa tsy ny Mpamorona. Te-hanompo ny lamba fa tsy ny mpanao hosodoko, ny pejy fa tsy ny mpanoratra. Tiantsika ny hanohy vola fa tsy ny iray izay manome ny zava-drehetra. Ary Jesosy niantso antsika mba handà izany sy manaraka Azy.
Raharaham-barotra ny Kristianina no Tsy mahafinaritra ny fahasorenana, na fifaliana ho alahelo. Raharaham-barotra ry zareo vonjimaika fifaliana, ny fifaliana maharitra mandrakizay. Raharaham-barotra ry zareo mahafaty fifaliana, fa aina manome mahafaly. Raharaham-barotra ry zareo mihelina, mora niova hevitra fifaliana, fa miovaova, Hanozongozona mafy orina fifaliana.
III. Ahoana no Ankafizo ny zavatra Hevero?
Miaina noho ny finoana ny Mpamorona.
Isika rehetra dia ho velon'ny finoana
Na tsapantsika izany na tsia, isika rehetra dia ny olona ny finoana. Ny olombelona rehetra. Kristianina, silamo, Hindoa, Bodista, Agnostics, Tsy mino an'Andriamanitra-isika rehetra velona amin'ny alalan'ny finoana, miaina ao amin'ny fahazavana ny zavatra inoantsika Na izany na tsy nomena fotoana. Ireo aminareo izay atleta mampihatra tena mafy. Nahoana? Satria mino ianao dia tsara kokoa ho anao eo amin'ny fanatanjahan-tena. Ary ahoana ny momba izany? Ny sasany aminareo hametraka ny adiresy ao amin'ny Google Maps mba hahazoana toerana. Nahoana? Satria nino fa ny finday no hanome anareo ny marina toro-lalana. Raha nino ny findainao no namitaka anao, Mihevitra aho fa ny ahy izay no indraindray, ianao dia tsy mba nampiasa izany. I afaka handeha sy ny. Fa isika rehetra velona amin 'ny finoana.
Amiko, ny fiainana tsara mbola velona noho ny finoana ny tsara Andriamanitra. Izy dia milaza amintsika ny fomba hankafy ny zavaboary ara-drariny. Mitarika antsika ho fifaliana.
Isaky ny itondrantsika ny zavatra hafa afa-tsy Andriamanitra toy ny farany mihitsy isika nankafy azy io tsy araka ny tokony ho.
Fun Tsy ampy
Fa angamba ny hevitrao, Tsy tiako izany. Te-hifalifaly. Ny hoe faly, nankafy ny tenanao tsy izay ihany ny fiainana dia ny. Raha ny hevitrao no, ianao amin'ny zavatra mampatahotra. Raha manorina ny fiainanao eo amin'ny fototra ny fahafinaretana, Ho tonga izany tumbling midina Rehefa misy sarotra. Fun, ho faly, nankafy ny tenanao fotoana izao dia tsy ampy. Nahoana no tsy manaraka fifaliana mandrakizay?
Ary Tsy ampy ny hiandry mandra taty aoriana. Nahoana no hiandry ny hanomboka velona? Aza nanenjika ny hosoka zavatra ary manomboka ny misambo-tena zavatra.
Tahaka ny tsy miraharaha ny NBA, satria mety fa hilalao NBA 2K amin'ny PlayStation. Aza nanenjika ny hosoka zavatra, Ka hanohona ny tena zava-misy izany. C.S. Lewis dia naneho fihetseham-po toy izany koa rehefa nilaza izany:
“Antsasaky ny fo isika zavaboary mamita momba ny amin'ny zava-pisotro sy ny firaisana ara-nofo sy ny fanirian-daza, rehefa fifaliana tsy manam-petra no nanolotra antsika, toy ny ankizy tsy mahalala izay te-handeha amin'ny fanaovana fotaka pies amin'ny slum satria tsy afaka an-tsaina izay no tiana holazaina amin'ny tolotra ny fety tamin'ny ranomasina. Lavitra loatra isika mora faly” - C.S. Lewis, Ny mahatanteraka voninahitra mavesatra
Mieritreritra aho taloha ny fiainana dia mandalo rehetra ireo fahafinaretana. Dia lasa Kristianina. Nisy namaky ny zavatra tany am-boalohany toy ny Kristianina izay nandrava ny sary taloha ny fiainana tsara. Ity ohatra.
Ny fahafatesana no ahazoako tombony
Isika rehetra dia efa nandre ny olona hiresaka momba ny maty tsindraindray. Izahay efa nandre ny olona hoe:, "Tsy misy zavatra eo amin'ny fiainana dia azo antoka fa ny fahafatesana sy ny hetra."Mpanao rap malaza iray hoe:, "Miezaka aho mba nikapoka ny fiainana, izaho tsy afaka hamitaka ny fahafatesana." Ny olona hahatakatra fa ny fahafatesana tsy azo ialana afaka. Fa ho toy ny tanora kristianina, Namaky ny andininy momba ny fahafatesana ao amin'ny Baiboly dia toy ny na inona na inona izay efa hatramin'izay nandre talohan'ny. Ny Apôstôly Paoly dia niresaka momba ny fahafatesana amin'ny fomba hafa. I Paoly hoe tsy ho faty antoka, Izy nandray ny dingana kokoa. Hoy izy, "Ny fahafatesana no tombony." Inona!?
Ny fahafatesana dia rehefa ny atidoha, ny fonao, ary ny havokavoka manao ny asany intsony. Ny fahafatesana dia midika hoe ny fifaranan'ny fiainana sy ny fisarahana amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana. Ny fahafatesana dia midika hoe ny fiainanao ny asa ny. Tsy toy ny fitsapana hafa, fahafatesana, fa ny olona izay maty, ara-bakiteny "ny fahataperan'izao tontolo izao"– ny faran 'ity iray ity ihany. Koa ahoana no mety ho tombony fahafatesana? Tsy afaka manao vola, raha tsy mbola maty aho? Tsy afaka ny sata kokoa rehefa maty aho. Tsy nifanaraka mihitsy taloha antonona miaraka amin'ny fomba fijery ny fiainana tsara.
Tsara mba ho ahy ny hahazo izay tian'i Paoly holazaina amin'izany teny efatra-ho fahafatesana no ahazoako tombony-tsy maintsy mahatakatra ny efatra izay tonga mahitsy eo anoloany. ao amin'ny Filipiana 1 Paoly manazava ny antony toa ho OK amin'ny mitoetra na velona na maty teo am-tànan'ny ny mpanenjika. Nanoratra izy eo amin'ny andininy faha 21, "Miaina NY Kristy. "Tsy ireo teny ireo, Nilaza tamiko ny apostoly ahoana ny fiainana dia tena rehetra momba ny- tsy vola, tsy ny asa, tsy family- fa i Jesoa. Ahoana no mety ny tia tena, sata-manahy be loatra fijery tafavoaka velona akaikin'ny izany fahamarinana?
Ny fiainana tsy misy dikany afa-tsy Kristy, satria i Kristy no zavatra izany rehetra momba ny. Koa mba tia zavatra ara-drariny, tsy maintsy tia azy ireo amin 'ny fomba izay mijoro ho vavolombelona ho izany marina.
Ny zavatra rehetra dia tsara kokoa, raha tia ao ny teny manodidina dia natao ho. Rehefa hitondrantsika na inona na inona toy ny farany ihany izany ratsy. Tsy tokony izy ireo ho toy ny fitaovana hatramin'ny farany ny voninahitr'Andriamanitra.
Tokony fotsiny toy ny manao firaisana amin'ny vehivavy maro araka izay azo atao? Na dia fotsiny na iza na iza ianao amin'ny fifandraisana akaiky amin'ny? Sex no tsara indrindra ao amin'ny fampakaram-bady nahafinaritra fanekempihavanana. Roa nataon'ny olona iray hafa noho ny sisa ny fiainany, Tsy mandeha na aiza na aiza. Tsy misy ilaina ny tsy fandriampahalemana, tsy misy mahamenatra. Mpinamana no nahafinaritra tsara indrindra ao anatin'ity lohahevitra ity. Misy ny fanetren-tena, famelan-keloka, fahasoavana, fitiavana.
Ny vola no tsara indrindra izany nankafy, rehefa tsy nivavaka. Power no tsara indrindra izany nankafy, rehefa tsy nivavaka. Inona no nitranga rehefa lasa? Ny divay araka ny antonony dia tsara noho ny fimamoana. Ary ampy Mazava ho azy dia afaka mankafy mozika sy sarimihetsika. Fa mieritreritra ny fomba mifandray amin'ny hevitry ny fiainana rehetra: Kristy. Ny zavatra rehetra dia tsara indrindra raha ny nankafy nanaiky an'i Kristy.
Isika tapaka, ary i Kristy tonga hitondra antsika indray hiara-. Rehefa mivavaka vola, na ny finamanana, na ny firaisana ara-nofo, izany fahatafintohinana ho an'Andriamanitra. Ary mendrika ny ho tsaraina ho an 'ireo fandikan-dalàna. Nefa Andriamanitra naniraka an'i Kristy. I Jesoa dia tsy manana olana amin'ny mankafy diso zavatra, na mankafy zavatra tsara amin'ny fomba feno fahotana. Anefa i Jesosy nandray ny sazy noho ny fahadisoantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Nitsangana avy ao am-pasana, ary manome antsika ny fiainana mandrakizay.
Raha Ho handao ny fomba taloha aoriana, ary hifikitra amin'i Kristy isika dia afaka ho voavela heloka, ary afaka hiditra ho any amin'ny fifaliana ny Tompo. Dia tsy miaina ny fiainana tsara indrindra isika izao. Fa Izy Ho manome antsika fifaliana sy fahafinaretana mandrakizay.
Victor • Oktobra 24, 2013 amin'ny 2:17 PM • navalin'i
Triggz • Oktobra 24, 2013 amin'ny 4:36 PM • navalin'i
Wow!tena dia fanaka 'Andriamanitra Brah,ary matoky ahy ianao aingam-panahy be dia be miaraka amin'ny fahatokiana sy ny finoana an'i God.these lahatsoratra no tena niova ahy amin'ny fomba goavana ary manantena aho ianao no nanoratra ho antsika noho ny antsika all.One andro izany te-ho tahaka anao,(Fantatro fa feo tahaka ny 6year antitra)rariny aho efa mifamadika ny Rap sy Poetry ny kristianina no fototry ny fiainana aho izao,noho ny dian-tongotra toy ny mijery ny FANAHY sy ny Hip HOP.stay Sambatra
Dawg sy hihazona ny finoany 116!
Deondre • Oktobra 24, 2013 amin'ny 4:41 PM • navalin'i
I dont tokony hiala ny fanehoan-kevitra Rahalahy Mino aho fa ianao no nitondra ny fahatakarana mazava ny listener.May foana Andriamanitra hitahy anao amin'ny faritra rehetra eo amin'ny fiainanao In Jesosy Name…
Maurice • Oktobra 24, 2013 amin'ny 4:51 PM • navalin'i
Izany no tena saina fanokafam-. Misaotra an'Andriamanitra noho ny teny nizara ianao.
Geordan • Oktobra 24, 2013 amin'ny 5:09 PM • navalin'i
Ary rehefa niresaka momba ny “Cheesey Christian Music” I vaky ny, tpt. Misaotra anao , Trip.
Christian Cole • Oktobra 24, 2013 amin'ny 5:11 PM • navalin'i
Izany no toy izany mahatahotra lahatsoratra! Misaotra ny teny sy ny fitaomam-panahy, Trip! Tsy mandeha fahita mihitsy izany.
Jessie • Oktobra 24, 2013 amin'ny 5:17 PM • navalin'i
Very tsara voalaza. Misaotra anao, Ruach HaKodesh, satria niteny izany fahamarinana izany amin'ny alalan'ny sambo vonona ity. Mahatalanjona..
BrookeMeghan • Oktobra 24, 2013 amin'ny 5:24 PM • navalin'i
Amen! Misaotra anao noho ny fizarana sy ny fampaherezana.
“Ny velona no Kristy, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony.” Filipianina 1:21 – Tompo, Mety ho tena miaina izany avy eo amin'ny fiainantsika! Misaotra Anao noho ny fahafahana ananantsika ao Ianao.
Jeremiah • Oktobra 24, 2013 amin'ny 5:25 PM • navalin'i
Ny famakiana izany fotsiny tahaka aho nandre
ny toriteny , Mahafinaritra izany ,, voninahitra !!!!!
Caleb • Oktobra 24, 2013 amin'ny 5:49 PM • navalin'i
Tsara zavatra Mr. Lee.
Shaunda • Oktobra 24, 2013 amin'ny 7:04 PM • navalin'i
Mampahazava persepective ny tanjona ny fifaliana sy ny fahafinaretana eo amin'ny fiainantsika. Tena nahafinaritra ny fomba voakambana fa notsongaina avy amin'ny C.S. Lewis manondro ny ankizy milalao amin'ny mudpies. Afaka mankafy ny fiainana ho an'ny feno toy ny Kristianina!
MasiyaChoice • Oktobra 24, 2013 amin'ny 11:16 PM • navalin'i
Eny tokoa ho faty dia ny hahazo. Kristy maty mba ho velona, ​​ary tokony ho velona ho Azy. Amin'ny maha tanora ny olona dia aoka ny maty any amin'ny tontolo izao, ary ho velona fahafinaretana any an-danitra harena.
Steph • Oktobra 25, 2013 amin'ny 12:38 aho • navalin'i
Ankasitrahako ny bilaogy Trip Lee. Niady mafy aho izany raha mbola be aho tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, na dia indraindray Ary raha mbola tany amin'ny oniversite…fotsiny miezaka hahatakatra ny fomba hankafy zavatra amin'ny fomba izay mijoro ho vavolombelona fa i Jesoa dia ny zava-drehetra ary inona izay toa toy ny niaina avy. Misaotra anareo indray.
MotsiriLebea • Oktobra 25, 2013 amin'ny 5:34 aho • navalin'i
Wow. Aho moana. Toy ny tena ? Aho nieritreritra aho hoe aho tonga mba hanova myslef alohan'ny tonga Kristy, fa diso.
Yuri • Oktobra 25, 2013 amin'ny 9:19 PM • navalin'i
Awesome zavatra! Omeko ny trano fiangonana hafatra ny teenaged ankizilahy faran'ny herinandro ity ny hevitry ny hoe avy amin'Andriamanitra ny hafa. Ireo manana hevitra lehibe izay dia mety tena fonony aminy koa.
Kiara • Oktobra 26, 2013 amin'ny 7:04 PM • navalin'i
Ity lahatsoratra ity dia tena fitahiana.
Chase • Oktobra 28, 2013 amin'ny 3:52 PM • navalin'i
Great hafatra, Trip. Foana ny maha-fahazavana eto amin'ity tontolo maizina izay ny ankamaroan'ny Celebs & haino aman-jery miezaka foana an'i Kristy amin'ny zavatra rehetra azo atao. tsara ny olona, voavonjy noho ny rany, foana handresy amin'ny farany!
Shauneil • Oktobra 28, 2013 amin'ny 5:16 PM • navalin'i
harbeegail • Oktobra 28, 2013 amin'ny 5:19 PM • navalin'i
Tsy maintsy hoe… Izany no hafatra avy amin'Andriamanitra. Talkd momba izany aho omaly anatin'ny mpiara tanora sy nahita ahy toy ny noroahina. Mahatsiaro ho maivamaivana aho, ary strenghtened izany izao. Tsy misy mandeha indray… Jesosy ve. More ny fahasoavan'Andriamanitra Rahalahy.
Ricky Jordana • Oktobra 29, 2013 amin'ny 2:26 aho • navalin'i
Izany no tena fitahiana Trip. Tohizo foana ny ezaka ho an'ny fanjakana.
uche • Oktobra 29, 2013 amin'ny 3:16 aho • navalin'i
Iray teny 'Oay!!!’
Enana • Oktobra 29, 2013 amin'ny 8:43 PM • navalin'i
Misaotra anao Rahalahy. Tena nila izany. Amin'ny maha-tanora zatovo kristianina, Matetika aho nahazo ny heviny diso ny atao hoe fahafinaretana sy ny mahafinaritra dia. Fa rehefa avy namaky izany, Tsapako toy ny aho hahatakatra tsara kokoa ny kely. Tena mankasitraka izany. mamerina ny fisaorana anao, Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakaviana. Tia anareo ao amin'i Jesosy…
Elvis • Oktobra 29, 2013 amin'ny 11:16 PM • navalin'i
Tena faly noho ny zavatra izay efa efa manao izany vohikala sy ny fiangonana eo an-toerana…Faly aho noho ny mahita ny ankamaroany U indray ao amin'ny Studio…Aho U juiced ny zavatra efa ho avy
Lewis dia unelle • Oktobra 30, 2013 amin'ny 8:11 aho • navalin'i
Izany dia tsara tarehy hafatra, izany fanompoam-pivavahana ho Ahy, ary misaotra betsaka anao, satria niresaka momba ny soratra masina Phillipians 1:21. Niezaka aho imbetsaka mba hahatakatra azy io amin'ny alalan'ny fihainoana toriteny. Mivavaka aho mba Andriamanitra Mbola mampiasa anao mba hanatsara sy hanorina-on ny fanjakana. Andriamanitra anie hitahy anao Bro.. Peace & tia ♡
DavidMoyo • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:01 aho • navalin'i
Izany no mahatahotra William, Tena mankasitraka ny transperancy sy ny humily mba hamela ny tenanao mba ho ampiasaina 'ny Tompo. hotahian'andriamanitra anie ianao
Marjorie • Novambra 1, 2013 amin'ny 7:22 PM • navalin'i
Izany sy ny maro hafa bilaogy hafatra ity dia marina ara-potoana & amin'ny teboka! Miderà ny Tompo! Misaotra anao noho ny fanaovana izany bilaogy, Aho nampahery foana ao amin'ny Tompo noho ny Lahatsoratra. Azafady Mitoria Foana ary soratra! Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao!
Jennifer • Novambra 15, 2013 amin'ny 7:29 PM • navalin'i
Wow! Ity hafatra Tena niteny tamiko! Misaotra betsaka noho ny zavatra ataonareo ho an'Andriamanitra sy ny maha-unashamed ny Filazantsara. koa, fa ny famelana an'Andriamanitra hitondra mifehy ny fiainanao. Enga anie Andriamanitra Aoka ianareo hirary soa anao sy ny fianakavianao mahagaga!
Ianao toy izany fitahiana be ny fiainako!
endy • Janoary 19, 2014 amin'ny 5:27 PM • navalin'i
Wow!! Hatramin'ny fotoana izao, I tho't izany kinda misokatra,interestin,zava-misy ny Fivavahana Kristianina i JST foronina tahaka namaky avy #Francinerivers boky. Aho tsy milaza na inona na inona teny. Io lahatsoratra io no tena nanohina ny zavatra ato amiko, ary izao no vonona 100% mba ho velona ho God..thanks TL..God hanampy anao mba tsy ho fitahiana. #Amen!
Michael • Janoary 29, 2014 amin'ny 1:35 PM • navalin'i
Great lahatsoratra, Tena tiako ny fanoharana.
Raha toa isika ka tena voavonjy, Ary Andriamanitra nahary antsika fo madio vaovao, ny didiny dia tsy ho greivous. (1Jaona)
Aza mahazo ahy ratsy, dia mbola mila fampianarana, fa raha voavonjy isika dia misy zavatra isika dia tsy te-hanao. Fakam-panahy ho azo antoka fa mbola ho avy, fa Andriamanitra dia tsy hamela antsika ho niezaka mihoatra noho izay zakantsika. Dia hamorona afa-mandositra.
Josh • Febroary 17, 2014 amin'ny 2:48 PM • navalin'i
Trip izany no mahavariana! Misaotra anao indrindra! Tiako ny toriteny, izy ireo ho aho no nahatsapa tena ho tsara Andriamanitra. Misaotra anao Rahalahy! Tandremo ny asa tsara ny.
aho 17 taona, ary izaho mahalala an'Andriamanitra fotsiny no mahavariana hoavy nametraka ho ahy.
Izaho koa te-manamarika ao amin'ny toriteny voasoratra. Adinonao taratasy LOL “OF” ianao nanoratra “F” LOL Just nahasarika ny masoko izany rehetra. Izany izay
“… Ary ampy Mazava ho azy dia afaka mankafy mozika sy sarimihetsika. Fa mieritreritra ny fomba mifandray amin'ny hevitry ny fiainana rehetra: Kristy. Ny zavatra rehetra dia tsara indrindra raha ny nankafy nanaiky an'i Kristy.”
Aho tia hihaino bebe kokoa! Misaotra anao Rahalahy!
Galactic • Oktobra 19, 2014 amin'ny 12:13 aho • navalin'i
Hi, ny zavatra rehetra dia mandeha tsara anefa eto, ary ofcourse samy nizara vaovao, izany no tena tsara, foana ny soratra.
Justin • Oktobra 29, 2014 amin'ny 9:57 PM • navalin'i
Wow ianao mahagaga mpanoratra sy ny mpampianatra! Ny fomba izay mitory ny Filazantsara no tena fanazavana mahaliana. Dia afaka mihaino sy mamaky ny toriteniny mandritra ny andro! Izy ireo no tena sakafo ho an'ny fanahy. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao!
Olobz • Desambra 1, 2014 amin'ny 5:56 PM • navalin'i
Tsara tsara tsara ny olona iray.
Ny tsara sy ny fitaomam-panahy modely. Manantena aho fa isika rehetra mahita any an-danitra, avy eo ary avy eo ihany anefa no fihira 'Sweet Fandresena’ ao aminy ny fahafenoan'ny. Fa ankehitriny Andriamanitra anie hitahy
Keaton • Febroary 22, 2015 amin'ny 12:28 aho • navalin'i
Rahalahy, Dia tena miaiky anareo toy ny mpitory bebe kokoa noho ny mpitendry zavamaneno, ary ianao no toerana tena mpanao rap. I ho tena tia ny fahafahana hiresaka momba ny fanompoam-pivavahana ho fanompoam-pivavahana fototra. Tena tia ny fonao ho Azy. Raha mba, Tsy mino aho no tokony kivy mozika 100%. Mino aho fa ny sehatra nomen'Andriamanitra anao ny mampandroso ny olona masina sy ny Evanjely ny mpanota. Masìna ianao afaka hampihavana ny filan'ny nofo koa fantatro tsara mba hiandry ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavana mahagaga mozika. Andriamanitra anie hitahy anareo ry rahalahy!
tamsyn • Desambra 28, 2015 amin'ny 2:45 PM • navalin'i
Ny fanahy dia tena zava-dehibe amin'Andriamanitra! Ary Wow rehefa mihevitra ny lahatsoratra ny maro aho matahora ny asa ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anao. ny mahagaga. Foana fitandremana amin'ny. Misaora voa rehetra sy ny rano ampiasaina anao Andriamanitra mba hanaparitahana ny tsara tarehy amin'ny tany. Enga anie Izy sy malemilemy dia ni- mitombo ny voa rehetra.